Chung-Ang University - Waxbarashada Sare ee South Korea
gaabinta : CAU
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Chung-Ang
Qor at Chung-Ang University
Chung-Ang University waa hay'ad gaar ah la 30,000 ardayda iyo 982 xubnaha macalimiinta. Waxay ka kooban tahay 10 kulliyadaha undergraduate iyo 16 dugsiyada graduate. Waxay ka shaqaysaa laba xarumood, in Seoul iyo Anseong, Korea.
dhidibada loo aasay 1918, CAU ayaa dhex koorsada daran ee taariikhda casriga ah ee Korea, ku hayaa ay haboon ee "Runta iyo Justice". Tan iyo markaas, CAU ka qaaday kaalin hoggaamineed ee waxgaradka ababin qaranka. Ixtiraamo sida hay'ad hoggaamineed waxbarasho tayo leh bixiya, CAU ayaa falkaasi xawaaraha ee hal-abuurka ee waxbarashada maxalliga ah.
Si buuxda u accreditied by Wasaaradda Waxbarashada of Korea, CAU waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah bachelor ee, sayidkiinna iyo barnaamijyada phD oo ay ku jiraan dugsiga sharci, Barnaamijyada MBA caalamiga ah iyo dugsiga caafimaadka. Thanks to hawlo firfircoon, kuwaas oo dugsiyada ', CAU helay aqoonsi top dalka ka MEST ee siddeedii sano ee la soo dhaafay.
Intaas waxaa sii dheer, CAU waxaa loo aqoonsaday dalka ugu wanaagsan ee beerihii farmashiyaha, dhaqanka iyo farshaxanka waxbarashada. Iyada oo taageero dugsiyada ah ee farshaxanka iyo dhaqanka ay, jaamacadda taagan xarunta of ruxruxo dhaqanka Korean, hadda lagu xaaqayo Asia iyo wixii ka dambeeya.
Sida machad weyn ee gaarka loo leeyahay, University Chung-Ang waxaa si buuxda uga go'an in ay hagaya ardayda Korean iyo kuwa caalamiga ah si ay u arka gool ay nolosha iyo gaaraan awoodooda ugu badan ee bulshada si isa soo taraysa ee tartan caalami ah.
Dr. Darbi-jiif Hoon Park waxaa la caleemo sida Madaxweynaha University 12aad ee February 2005. Sida uu shaqo ugu horeysay ku dul doorashada, waxa uu qabtay qiimeynta Golaha Korean ee Waxbarashada University, marketing caasimada, BK21, Oogidda Graduate School Professional ee Law, iyo shirkadaha kale ee qaranka.
Dibudhisid of Education Science Technology Kulliyadda, taas oo ahayd arrinta ugu weyn ee ku raco, waxaa si guul leh waxaa loo magacaabay jaamacad sare iyo abaal dayactirka deeqda (KRW 9,100,000,000) dhigma in ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn tartame, in kasta oo ay muddo tijaabo ah 1-sano.
Ka dib markii Manhajkooda barnaamijyada undergraduate ah, shaqaalaynta ee cusub, diiwaangelinta ardayda hadda, Xaaladda dhaqaale iyo diiwaanka maamulka guud oo ka mid ah saddex dugsi xirfadeed iyo 11 dugsiyada gaarka ah, ayaa la falanqeeyay si loo ogaado aagagga u hagaajinta iyo kor loogu qaado tayada baridda. Sayidka, 32 ka mid ah 42 shaqaalaha ka dugsiyo xirfadeed iyo dugsiyada gaarka ah ayaa la qoraayo dugsiga guud graduate, iyo 10 jagooyinka la dhimay. Xubnaha ayaa qoraayo dugsiga guud graduate ayaa gabaabsi si ay ugu adeegaan sida lagu daydo aasaasiga ah ee la xirrira Group Research mudnaanta leh (Shaqaalaha), dhismaha taliskii cilmi wadaaagin a.
masduulaagii 2018(2001-2004), taas oo ahayd qorshaha horumarinta uu xeeladda ku hoos madaxweynaha jaamacadda 11aad si ay u fuliyaan jaamacadda aragtida diirada jaamacadda by guuradii Centenary ah, waxaa dib-u-tilmaamay sida CAU2018 +(2005-2008). CAU2018 + taxan index qiimaysay ee warshadaha kala duwan oo isha dakhliga la filayaa in si faahfaahsan. Si aad u dhammayn gool ah, CAU2018 + waxaa la hirgeliyey laba marxaladood.
Waayo, afartii sano ee ugu horeysay ee Dr. dheer darbi-jiif Hoon Park ee xafiiska, khayraadka ayaa si xoogan maalgeliyeen qalabka waxbarashada / cilmi. Sayidka, Hall Law qaranka ee ugu weyn waxaa la dhisay bishii Febraayo 2007, iyo qorshaha gal kor loogu talagalay dhismaha ee Farmashiyaha iyo Dabiiciga Science R&D Xarumaha agagaarka Entrance ah Main ee Campus 1, iyo Engineering R ah&D Center by Gymnasium ee,
In 2008, ku Practice Section Media la aasaasay Hall Sharciga iyo 400 waardiyayaal ah oo dheeraad ah lagu daray in isbitaalka affiliate ah. Iyadoo la raacayo, Qorshaha Chung-Ang Site Construction, waxaa ka mid ahaa in Plan CAU2018 + Development waa la dhigay in mooshin.
ee November 2007, oggolaansho waxaa laga helay Hannam-si, horumarinta jaamacadda ah, Hannam Campus. Camp Colbern, oo markii hore ahaa a keento ciidamada Maraykanka 86,000 pyeong la dayactiray doonaa ujeedada. Koox loo nidar doonaa halkii beerta ku xiran inay u taliyaan maamulka.
244 Macalimiin waqti-buuxa ah ayaa la shaqaalaysiiyay dhexeeya 2005 iyo 2009, iyo in simistarka kowaad ee 2009, 25 wakhti buuxa iyo shaqaalaha waqti-dhiman ayaa la shaqaalaysiiyay.
Sharciga iyo Dugsiyada Medical ayaa waxaa la aasaasay bishii March 2009.
KRW 40 bilyan oo lacagta horumarinta, KRW 166.3 billion of deeq cilmi dibadda, iyo KRW 17.3 billion oo caawimo ah dowladda qoondeeyey sida ganacsi dowladda maal-a ayaa xaqiijisatay ka badan 4 sano tan iyo Dr. caleema darbi-jiif Hoon Park ee xafiiska. Wadarta ee KRW 223.6 billion waa inta ugu badan xaqiijisatay dhaqaale ee taariikhda jaamacadda.
Meey dhexdeeda 2008, shirkad caalami ah, Doosan Group, waxa lagu daray sida hay'ad waxbarasho, iyo Yong-Sung Park ayaa loo doortay Guddoomiyaha 9aad ee Guddiga.
Magacaabista Guddoomiyaha Park, oo gorgortan warshadaha-wareeg ah Doosan Group ka badeecadda in industry culus, astaan ​​nadiifinta dhalashadii labaad ee jaamacadda. gudahood 80 maalmood ee uu xafiiska, shir lagu qabtay shaqaalaha cilmiga ku saabsan 27 August 2008, meesha + Mid-Term Qorshayaasha CAU2018 Horumarinta ayaa ku dhawaaqay oo ay la socdaan jihada istaraatijiyad cusub ee "Doorashada iyo aruuri, Xoojinta Awooda Fulinta, Dhismaha Qaabdhismeedka Cycle kala duwaan ".
System Management Degree ayaa u xoogaystay si loo dhiiri galiyo ardayda aad u barato, sida si ay u qalin jabiyaan, ardayda ayaa ka dhigay inay gaadhaan heerka ugu yar ee maadooyinka qasabka ah sida English iyo Accounting.
Si loo taageero noocan ah cilmi, waxbarashada iyo dhaqanka si wax ku ool more, R ah&D Center ee College of Farmashiyaha iyo tacliinta cusub ee ardayda ayaa la dhisay, Maktabadda Dhexe dayactiray, iyo isbitaalka kordhiyay in ay ku habboon 300 waardiyayaal dheeraad ah.
mashaariicda Research ayaa sidoo kale lagu taageeray by Guddiga Gaarka ah ee Xoojinta suuq Research ah.
isbedelka noocan oo kale ah horay u keentay in magacaabista ah ee lix shirkadood oo cusub oo ku jira marxaladaha labaad ee ganacsi BK21 ah, iyo miisaaniyad of KRW 6 bilyan oo la qoondeeyay in kooxda cilmi-baarista keentay, sidaas fulinta ee "doorashada iyo shancosbitaal" istiraatiijiyad.
Nidaamka doorashada tooska ah ee madaxtooyada oo la tirtiray, iyo bedelay habka magacaabista. Sidaas awgeed, Madaxweyne 12aad, Dr. Darbi-jiif Hee Park, dib loo magacaabay xafiiska madaxweynaha oo isku xigta 13.
Mashruuca ugu wayn ee la sii adkaysteen by Dr. Darbi-jiif Hee Park iyo shirkad ka, waa abuuritaanka Hannam Campus. In 2007, Memorandum of Understanding waxaa badelay la Hannam, iyo sidaas diyaarinta abuurista Hannam Campus ayaa haatan socda.
Sida of February 2009, Chung-Ang University, sida hay'ad dhamaystiran, ayaa soo saaray mid ka mid ah dugsiga ka qalin guud, shan dugsi xirfadeed graduate, 11 dugsiyada graduate khaas ah, 18 kulliyadaha modularised ee dhismaha oo dhan Seoul iyo Anseong, oo soo saaray wadar ahaan 147,196 darajo Bachelor ee, 29,940 degrees Master ee, iyo 4,275 Doctorates.
In March 2014 University Chung-Ang bilaabay aqbalin in ciyaartoyda video kulankii ay Department of Science Sport.
Ma rabtaa wada hadlaan University Chung-Ang ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Chung-Ang on Map
Photos: Chung-Ang University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Chung-Ang University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Chung-Ang University.